Kanal İstanbul Call oo ka socda İmamoğlu: 'Ka soo noqo Qaladdan' | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulCanal Istanbul Wicitaankii Imamoglu: 'Ka soo noqo Qaladdan'
19 / 01 / 2020 34 Istanbul, GUUD, Channel Istanbul, WADADA, Headline, Gobolka Marmara, TURKEY
imamoglundan channel istanbul ugu yeer dhaxan qaldan
Madaxweynaha İBB Ekrem İmamoğlu wuxuu ka hadlay "Kanal Istanbul Panel" oo ay soo qaban qaabiyeen İYİ Party iyo gudoomiye Meral Akşener sidoo kale goobjoog ayuu ahaa. Isagoo ku adkaynaya inuu u yeedhay wicitaan furan, İmamoğlu wuxuu yidhi, Halkan waxaan ugala hadlayaa qofkasta, dhamaan masuuliyiinta Ankara, anigoo ku hadlaya magaca reer Istanbul dhamaantood, inay yimaadaan damiirkooda. Kaalay oo ka fikir mar kale. Dib uga noqo qaladkan. Umaddani waa inaysan kaa kaa celin khaladkan. Dhageyso codka damiirkaaga. Dhagayso qaylada dadkaan. Ha isku dayin magaaladan gaarka ah, khiyaanada aan la beddeli karin. Maxaa yeelay magaaladan ayaa dhamaanteen naloogu deeqay sidaa darteed magaaladan, ee innaga aaminay wixii aynu hore uqabnay, ayaa mustaqbalkeeda loo aamin karaa si isku mid ah. Waxaan rajeynayaa inaan ku siin doono tan oo ku siin mayno fursad aad magaaladan sharka ah ku dhex sameysid.
Madaxweynaha Dawladda Hoose ee Magaalada Istanbul (IMM) Madaxweynaha Ekrem Imamoglu ayaa ka qeyb galay gole cinwaankiisu ahaa "Mashruuca Canal Istanbul iyo Xaqiiqda Ka Dambeysa" oo ay soo qabanqaabiyeen Xisbiga IYI ee Xarunta Halic Congress Center. Martida gudiga, Gudoomiyaha Xisbiga IY M Meral Akşener iyo Gudoomiyaha ProYİ ee Magaalada Istanbul Buğra Kavuncu ayaa hoolka la galay İmamoğlu iyo afadiisa Dilek İmamoğlu. Kavuncu wuxuu sameeyay khudbadii ugu horaysay ee golaha hortiisa. Kadib, qaybta guddiga ee uu dejiyey Ahat Andican, kuxigeenka IYI Istanbul, ayaa la bilaabay. Borofisar ku takhasusay cilmiga deegaanka ee Jaamacadda Hacettepe. Dr. Cemal Saydam iyo safiirka howlgabka ah Faruk Loğoğlu ayaa khudbad ka jeediyay.
“Xumaynta Aadanaha waa wax aan fahmayn markaan arko TRAUMA”
Isaga oo lahadlaya xubnaha golaha kadib, İmamoğlu wuxuu si kooban u yiri:
“Markaad aragtid shilkaas wuxuu ku dhici doonaa xumaanshaha xiriirka ka dhexeeya Badda Madoow, Marmara iyo Aegean, hurdada dadku way sii yaraaneysaa. Kuwani waa xaqiiqooyinka. Waxaan rabaa inaan ka fiiriyo aragti yar oo ka duwan. Gaar ahaan, waxaan dooneynaa in arrintan in badan laga wada hadlo. Sababtoo ah sanadkii 2011, isbuuc ka hor doorashada, filim xukun oo animation ah oo keenay mowduucan ajandaha, xisbiga xukuma wakhtigaas, ayaa kor u qaaday arrinta ilaa maalintaas. Waligiis ma furin, waligiis lama sheegin. Maaha in la xuso, isagu kuma doodi jirin dadka yaqaan wax war ah oo ku saabsan kanaalka. Sidoo kale ma abuurin deegaan isweydaarsi macluumaad midkoodna. Wadahadalka, ka wada hadalka iyo fahamka maanta waa faa iido noo leh. Daraasaddeena ugu dambeysay, waxaan ka helnay xogta ah in bulshada ay aqoon culus u leedahay mowduucan. Tani waxay muujineysaa in dalku leeyahay arrimo qotodheer maanta. Saboolnimo, shaqo la’aan, dhibaatooyin dhaqaale bilowgii… intaas oo dhan, kadib wasiir soo baxay isagoo leh "Waxaan sameyneynaa hindisada Canal Istanbul", waxaan sidoo kale la wadaagnay tan reer Istanbul. Sug, aan aragno. Waxa socda Maxaad qabanaysaa Maxaad qabanaysaa Ka dib markii la waydiiyey sababta aad su'aalahaaga u sameyneyso, waxay bilaabeen inay falanqeeyaan Istanbul oo ay aasaas u noqdaan wareejinta ilaha macluumaadka caafimaad ee annaga iyo shacabka. ”
“Muwaadiniintu Uma Ogolaan Doonaan Ujeedada Xogta”
Hawshan, waxaan ka helnay baaritaanno in kasta oo muwaaddinku ka warqabo faa iidooyinka, ay u arkaan faa'iidooyinkooda iyo waxyeellooyinkooda, marna ma oggolaanayaan mashruucan. Dabcan, waxaan aragnaa dabeecad: 'Waan dooneynaa, waan arki doonnaa!' Ma jiro aragti kale. Warbixinta EIA waa la hakiyey, diidmo ayaa la siiyaa, hay'ad ahaan, diidmo shaqsiyadeed ee warbixinta EIA waa la iska indhatirey oo warbixinta EIA waa la oggolaaday. Waxaan dhahnaa, Uma baahnid inaad qanciso, Madaxweynaha IMM. Dunida sayniska; ku filan. Muwaadin reer Istanbul ah ayaa durbaba ku qancay wakhtigaas. Laakiin maskaxda iyo saynisku waxay ku muujiyeen aragti aad u cad dareenkan. Kanal Istanbul waxaa la bilaabay 2011. Doorashadii 2015 ayaa timid, waxay yiraahdeen, Yaan aanaan mawduucaan hada soo gelin. Doorashooyinka deegaanka ee 2019 ayaa yimid. Xusuusnow, Ma jiro xukun dil ah. Xulashada noocan oo kale ah waxay ku saabsan tahay Istanbul. Waxay ku dhammaadeen doorashada iyadoon lahayn hal jumlad oo keliya oo ku saabsan mashruuca, oo ay aad u danaynayaan Istanbul oo ay aaminsan yihiin inay ku guuleysan doonaan guusha adduunka ugu weyn. Hawlgalkan aamusnaanta leh kadib, waxay u soo baxeen sidii "Waxaan garaacnay pickaxe."
“Waxaan ugu yeeraa mashruucaan 'Chameleon project'. Mashruucan wuxuu galayaa midab kasta. Sannadkii 2011, Mudane Madaxweyne, isaga oo ka hadlaya qeexitaanka mashruucan, wuxuu dadka ku leeyahay: 'Mashruucan waa mashruuc dhinacyo badan leh. Sidoo kale waa tamar, gaadiid, shaqooyin dowladeed, waxbarasho, shaqo, magaalo magaalo, qoys, guryeyn, mashruuca deegaanka. Waa mashruuc lagu difaacayo Istanbul, beeraha, cagaarka, xayawaanka iyo nolosha. ' Wax walbaa waxay ku jiraan mashruuca. Waxaan aqriyay bayaankan ugu yaraan 10 jeer. Halkee ayuu maanta ku eg yahay? Waan heli kari waayay. Markaasaan idhi, "Filimkaas fudud ee jilicsan, waxaan filayaa inay u sheegeen Madaxweyne kale mashruucaas wakhtigaas." Mashruucan ma ahan mashruucaas. Kuma haboona qeexitaannadan. Wax alla wixii aad ku jirtid. Way u wanaagsan tahay wax walba! Aniguba waan kacsanahay. Ma aqbali karo inuu noqdo Madaxweynaha IMM. Waan caasiyey Waxaan sidoo kale arkaa kacdoonkeyga inay maqlayaan malaayiin muwaadiniinteyda ah. Waxaan sidoo kale arkaa caasinimadooda sidoo kale.
"WAA IN AAN KA HADLANNAANNAAN HALKAAN"
Waxaan u maleynayaa inaanan ka hortagin howshan anagoo ku soo bandhigeyna howshan dadaalo kala duwan oo ku saleysan sharciga, oo leh dareen sax ah, iyo caqli sax ah. Dabcan waxaan yeelan doonnaa aqoon-isweydaarsiyo, dabcan waxaan ka wada hadli doonnaa arrintan, waxaan u diidi doonnaa warbixinta EIA. Iminka, 100 kun oo qorshooyin ayaa la sugaya. Waxa aad ugu yeedho qorshe 1 / 100.000 waa xeerarka joogtada ah ee magaalada. Shaqadan looma qabanaayo albaabada xiran. Laguma qaban xafiiska mashruuca. Waa mid u furan dadweynaha. Qorshaha 100 kun ma ahan arin fudud. Waan ka soo horjeednaa tan. Shalay ayaan sameeyay. Waan ku qasbanahay. Waa inaan u adeegsanaa xuquuqdeena sharciga ah si buuxda. Tirada dadka ay u barakicinayaan dadka ku nool 6 xaafadood oo ku kala yaal 19 degmo waa 316 kun oo qof. Waad barakicisay oo gaadiid 316 kun oo qof. Dhibaatada dhabta ah, rafiiqa ugu weyn ayaa halkan ku burburaya. Bulshada halkaa ku sugan kama warqabaan arintaas. ”
“MARKA AADAN FARSAMADA AQOONIN, WAA INAAD FURATAA DALKA DALKA”
“Waxay u muuqataa in qarashka Kanal Istanbul ee ay dowladdu soo bandhigtay ay tahay 100 bilyan oo liras. Si kale haddii loo dhigo, culeys dheeraad ah, canshuur dheeri ah oo muwaadinka lagu siiyo qeexitaankooda, waa 100 bilyan oo lira. Marka, xilligan la joogo, markii ku dhawaad ​​sedex dhallinyar kasta ay shaqo la 'yihiin, halka dadkeenu ay kala baxayaan shaqo la’aanta, waxaa jira waxyaabo kale oo aan u baahanahay inaan xallino, culeyskan oo kale ah waxaad saaraysaa dhabarka dadka. Wuxuu sameeyaa sagaal Marmaray. In kasta oo aad ciribtiri karto dhibaatada dhulgariir ee dhammaan Istanbul, waxaad culeys sidaas oo kale ah u aragtaa Istanbul. Waa maxay sababta? Waxaad mar kale ku aasi doontaa Istanbul si la taaban karo. Dhamaadka hanaankan, waxaad ku qaldanaan doontaa xagga kharashka. Markaa waxaan filayaa inaad taqaanid. Taas yeeli mayno, bal aan taas dhaho.
YAA LOO BAAHAN YAHAY?
Waxaan u sheegnaa kuwa raba inay nagu qasbaan inaan sidan sameyno; 'Maxaynu waajib ugu nahay?' Kumaa waajib ku ah? Ma nihin. Beelo tiro yar ayaa la qasbay. Kumaa waajib ku ah? Haa, kuwa iibsada dhulkaas 30 milyan ee mitir laba jibaaran waa waajib. Waxay noloshooda ku xidheen halkaas. Sida iska cad, kuwa dhisi doona kanaalkaas iyo dhismooyinka ku xeeran sidoo kale waa lagu khasbi karaa. Waan fahmi karaa taas. Laakiin waligeen waajib kuma lihin Kanal Istanbul. Dadka reer Istanbul ma leeyihiin damac sidaas ah. Muwaadinku ma aqbalayo. Kuwa cunaya amarka qashinka, waxaan xirnay albaabada maamulka Istanbul. Cidina kama faa'iideyso amarka qashinka mar dambe IMM. Waxaan xoogaa shaki ka qabay in howshan ay kicinayso. Mudane Meral Akşener, waxaan bilaabay inaan ka fikiro markii aan idhi 'waxaad tahay dambiilaha'. Haa, waxaan u maleynayaa in doorashooyinka 2019 ay ahaayeen waxoogaa kicin kara. Waxay kicisay howshan dareenkan. Waxaan ku dadaalnaa adeegsiga akhlaaqda wanaagsan ee Kheyraadka guud ee IMM. Marnaba uma oggolaanayno xisbinimo. Waxaan u maleynayaa in dadka loo adeegsado amarka qashinka inay ku qasban yihiin Kanal Istanbul. Annagu kuma khasbanayn. Dadka reer Istanbul waajib kuma ahan. ”
Waxaan haysanaa waxyaabo badan oo aan adduunka ka aqri karno ”
Waxaan haysannaa waxyaabo badan oo aan dunida kula tartameyno. Hadalheena qiimaha badan waxay kahadleen guusha. Uma maleynayo in caqabadaha adduunka ay ku jiraan qaab sare. Si kasta oo aad halkan ugu qayliso, kama maqli doonaan Japan, Korea, Australia ama Europe ama xitaa deriska Bulgaria, Georgia. Laakiin xirfadaha teknolojiyada, guulaha, daabacadaha akadeemiyadeed ee guuleysta, cilmi baarisyada sayniska ee aad soo bandhigi doonto ayaa codkaaga ka dhigi kara adduunka. Waan fahamsanahay dhawaqaas. Markaan nidhaahno guusha caalamiga ah kama yeerno qaylo, laakiin waxaan qeexnaa guusha maskaxdeena. Nasiib darrose, sida hadalka dalka oo kale, Wasiirka Teknolojiyadda ayaa soo baxa oo ku hadla ‘Kanal İstanbul in Kanal İstanbul’. Kulan ay tahay in looga wada hadlo teknolojiyadda. Kulan ay tahay in looga hadlo magaalooyink caqliga badan. Halkaas ayaan ku cadeeyay, sidoo kale halkaan ayaan ku sheegi doonaa. Kuwani waxay u baahan yihiin in la ogaado. Iyagu waa aagagga aannaan ka yeeli karin inaan ku guuleysanno. Farqiga u dhexeeya yaraanta hadda jirta iyo dhoofinta dhoofinta waddankeenna ee la xiriira alaabooyinka tikniyoolajiyadda sare leh 5 sano waa $ 2019 bilyan marka laga reebo 107. ”
WAA INAY IIMAAHAY BILAAHII UGU DAMBEEYAY ”
“Waxaan dhahnaa Hani? waxaan nahay dal ku tiirsan saliida. Maya, waxaan nahay dal tikniyoolajiyadeed ku badan. Dadku way soo saaraan, waanu cunnaa. Sababtaas awgeed, Wasiirka Farsamada, sayid, wuxuu xasuustay buuraha qashinka qumman, shan iyo labaatan sano ka hor, magaaladan waa la badbaadiyey, kanaalkuna isagaa iska lahaa.waxaan bogaadinaynaa wax kasta oo si wanaagsan loo qabtay. Mudane Madaxweyne wuxuu kaloo u adeegay magaaladan. Badhasaabyadii hore iyo kan xiga ee magaalooyinka waa sidoo kale la adeegsaday. Ilaahay raali ha ka noqdo dhamaantood. Laakiin waxa ay si fiican u qabtaan. Haddii Istanbul ay dunida ka hor imaanayso, dhallinyardu way ku guuleysan karaan oo ay ka dhiidhiyaan waxa ay ka soo saari doonaan wax soo saarka, dhalinyarada waxay ku saabsan yihiin teknolojiyada, soosaarka jiilka soo socda. Run ahaantii, Istanbul waxay ka takhalusi doontaa dooddan kanaal iskaashi ah. ”
MA OGTAHAY INAAN SI AAD U RAADINNAYN DHAQANKAAN "
“Tani waligeed maahan arin siyaasadeed, laakiin waa arin muhiim ah. Waxaan ka eegnaa tan aragtidan oo waxaan siinnaa go'aankan iyo halgankayaga sharciga. Waxaan u arkaa go, aanka ah in lala dagaallamo sharciga sharciga oo leh dhammaan dareenka bulshada iyo dhammaan dareenkiisa. Waxaan diyaar u nahay inaan wax walba oo farsamo ah ku soo kordhinno tan ka jirta Istanbul. Laakiin iyada oo loo marayo garyaqaanno laakiin loo marayo dadka farsamada ... Waxaan rajeynayaa inaan magaaladan u keeno runtaan. Weli, waxaan ku baaqayaa mid furan oo cad. Laga soo bilaabo halkan, waxaan ka codsanayaa qof walba, dhammaan maamulayaasha Ankara, damiirkooda anigoo ku hadlaya magaca reer Istanbul oo dhan: Maskax ku soo dhaca, tijaabi sayniska. Kaalay oo ka fikir mar kale. Dib uga noqo qaladkan. Umaddani waa inaysan kaa kaa celin khaladkan. Dhageyso codka damiirkaaga. Dhagayso qaylada dadkaan. Ha isku dayin magaaladan gaarka ah, khiyaanada aan la beddeli karin. Maxaa yeelay magaaladan ayaa dhamaanteen naloogu deeqay sidaa darteed magaaladan, ee innaga aaminay wixii aynu hore uqabnay, ayaa mustaqbalkeeda loo aamin karaa si isku mid ah. Waxaan rajeynayaa inaan ku siin doono tan oo ku siin mayno fursad aad magaaladan sharka ah ku dhex sameysid.
Baydhabo waa mid aan sax ahayn - Erdem Saker
Ima casuumin Munaasabadda Airportmamoğlu ee Maddaarka Istiraatiijiyadda Magaalada Ray Kaynak
Maanta Taariikhda: Disembar 9, 1871 Roobab mahiigaan ah oo ka da'ay magaalada Edirne iyo agagaarkeeda demiryolu
Maanta taariikhda: 9 Diisembar 1871 Iyadoo roobab culus ay ka da'een Edirne iyo agagaarkeeda ...
Waa inuu ka soo laabto fahamka suuqyada ee IZBAN
Wasaarada arimaha dibada ee Turkiga
Darawaliinta jooga Istanbul Digniin! Xadgudubka Fudud ee Baaskiilka
Channel Istanbul ayaa dhaliyay dhulgariir
Gudiga Kanal Istanbul
Ma tahay in laga sameeyo Kanaal Istanbul?
Qiimaha Kanal Istanbul
Khasaaraha ka dhashay Kanal Istanbul